Mogadishu Journal » Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Oo La Kulmay Jaaliyadda Soomaalida Ee Sudan.
(mjournal):Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay magaaladda Khartoum kula kulmay Jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan dalka Sudan.
Madaxweynaha oo la hadlayay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa uga mahadceliyay dowladda Sudan fursadaha waxbarasho ee ay siisay ardayda Soomaaliyeed xilligii uu burburka ka jiray dalka Soomaaliya iyo kaalmada ay u fidisay shacabka Soomaalida.
Madaxweyanaha ayaa ardayda iyo jaaliyadda uga warbixiyay xaaladda iyo isbeddelka ka jira dalka, wuxuuna sheegay in laga soo gudbay xilligii ku meel gaarnimada isagoo faahfaahin ka bixiyay doorashooyinkii ka dhacay dalka iyo horumarka ay dowladdu ku tallaabsatay.
Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu intaas ku daray inay dowladdiisu siineyso ahmiyadda ugu horreysa amniga, wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay aqoontooda uga faa’iideeyaan dalka iyo dadka.
Madaxweynaha jamhuurriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka Suudaan uga qeyb galay 57-da guuradii ka soo wareegtay markii uu dalkaasi xornimada qaatay.ayaa shalay magaalada Khartoum kula kulmay dhiggiisa dalkaas Cumar Xasan Al-Bashiir.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale shalay soo kormeeray warshadda lagu farsameeyo lacag ay dowladddi KMG aheyd ee Soomaaliya horay uga dalbatay inay u daabacdo dowladda Sudan taasoo lagu heshiiyay inay Sudan sii heyso tan iyo inta laga tayaynayo laamaha maaliyadeed ee dowladdda Soomaaliya.